You are at:Home»संगालाे»संस्मरण»गोरखा भूकम्पको चार बर्ष पूरा ! कस्तो रह्यो गोरखामा पूर्ननिर्माण ?
By HamroGorkha on	 April 25, 2019 संस्मरण, स्थानिय समाचार
गोरखा । विनाशकारी गोरखा भूकम्प गएको चार बर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल बैशाख १२ गते बिहान ११ः५६ बजे गोरखाको वारपाक केन्द्र बिन्दु भएर गएको भूकम्पले गोरखामा ७१ हजार नीजि घर, ४ सय ३३ विद्यालय, ७७ स्वास्थ्य चौकी, सयौं धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल, सयौं खानेपानीका स्रोतमा क्षती पु¥यायो । त्यस्तै ४ सय ७२ जनाले ज्यानै समेत गुमाए भने हजारौ घाइते भए । चार बर्षलाई फर्केर हेर्दा गोरखामा पुर्ननिर्माणको काम अन्य जिल्लाको तुलनामा सन्तोषजनक नै देखिएपनि सोचेअनुसार र पिडितको भावना अनुसार भने हुन सकेन । बिशेष गरेर विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवनमा उल्लेखनिय प्रगती हासिल भए पनि नीजि आवास, धार्मिक स्थलहरुको पूर्ननिर्माणमा भने सरकारले सोचे अनुसार उपलब्धी हासिल गर्न सकेन ।
त्यस्तै लाप्राक र बगुवामा निर्माण भइरहेको एकिकृत बस्ती निर्माण सम्पन्न नहुदा त्याहाका झण्डै ७ सय ११ घरधुरीका परिवार अहिलेसम्मपनि अस्थायी टहरामै छन् । यसैगरी जिल्लामा ४ बस्ती पहिरोको उच्च जोखिमका रहेको भन्दै भूगर्वविदले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाएपनि उल्लेखनिय प्रगती देखिएन भने लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका, गुनासो फारम भरेका, सुकम्बासी भूमिहिनहरुको घर पुर्न्निर्माणमा अझै अन्यौलता छ । त्यस्तै पछिल्लो समय प्रवलिकरणको सूचीमा रहेका अधिकांश घरले पुनः गुनासो फारम भरेपछि घर मर्मत गरी बस्नेको संख्या अत्यन्त कम देखियो ।
भूकम्प लगत्तै सयौ एनजिओ तथा आइएनजिओ जिल्लामा ओइरिएपनि कमैले मात्रै पूर्ननिर्माणको काममा सघाए । तर पूर्ननिर्माणमा सघाउने अन्तराष्ट्रिय तथा स्थानीय गैससहरुको भुमिका भने बलियो देखियो । जिल्लामा बनेका अधिकांश विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवनमा गैरसरकारी संस्थाहरुले लगानी प्रशस्तै गरे ।
जिल्लामा चार बर्षको अन्तरालमा ७० प्रतिशत घर पूर्ननिर्माण सम्पन्न भएका छन् । ७१ हजार ५ लाभग्राही रहेको गोरखामा हालसम्म ४९ हजार ७० जनाले मात्रै घर निर्माण सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई गोरखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उनिहरुले घर पूर्ननिर्माण सकि तेस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् । यसैगरी ६४ हजार ७ सय ३ भूकम्प पिडितले पहिलो किस्ता लिएकोमा ५७ हजार ९ सय ८ भूकम्प पिडितले दोश्रो किस्ता लिएका छन् । पहिलो किस्ता बुझेका ६ हजार ७ सय ९५ लाभग्राहीको घर निर्माण कार्य पुरा नभएकाले उनीहरुको खातामा दोश्रो किस्ता गएको छैन । ‘पहिलो किस्ता लिएका मध्ये कतिपयले अहिले सम्म घर बनाउनु भएको भएको छैन’ इकाई गोरखाका प्रमुख रामशरण आचार्यले भने ‘कतिले डिपिसीसम्म गर्नुभएको छ तर दोश्रो किस्ताको लागि पहल गर्नुभएको छैन् ।’
पहिलो किस्ता बुझेका मध्ये केही लाभग्राहीले आर्थिक अभावको कारण घर नबनाएको र कतिपय अनावश्यक व्यक्तिले समेत रकम बुझेकाले सत प्रतिशत प्रगती निस्कन समस्या भएको प्राधिकरणले बताएको छ । दोश्रो किस्ता बुझेका मध्ये पनि ८ हजार ८ सय ३८ लाभग्राहीले घर निर्माण कार्य पुरा नगरेका कारण तेश्रो किस्ता पाएका छैनन् । ‘घर आवश्यक नपरेपनि सरकारले पैसा दिइहाल्यो भनेर डिपिसी गरेका कतिपयले त्यसपछिको कामलाई निरन्तरता दिनुभएन’ इकाई प्रमुख आर्चायले भने ‘कतिपयले दोश्रो किस्ताको डेढ लाख रकम अन्यत्र खर्च गर्नु भयो अहिले घर बनाउन उहाँहरुलाई समस्या भयो ।’
भिमसेन थापा गाउँपालिका ५ लामाचौरमा निर्माणाधिन एकिकृत मिलन बस्ती ।
लाभग्राहीको सुचीमा समावेश भएकामध्ये पनि ६ हजार ३ सय २ जनाले अहिलेसम्म पनि पहिलो किस्ता नै बुझेका छैनन् । यसमध्ये कतिपय भुमिहिन समेत छन् । ५ हजार ३ सय १९ प्रवलीकरण लाभग्राहीको सूचीमा छन् । प्रवलीकारणमा नाम समावेश भएकामध्ये १ हजार ३ सय ७९ ले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ‘प्रवलीकरण तर्फ धेरैले चासो देखाउनु भएको छैन’ उनले भने ‘केहीले अनुदान सम्झौता गरेपनि उक्त सूचीमा रहेका झण्डै ४ हजार जनाले पुर्ण लाभग्राही कायम हुने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ ।’ लाभग्राहीको सूचीमा रहेका मध्ये १ सय ७५ जना भूमीहिन भूकम्प पिडित रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
घर निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका भूकम्प पिडितको तथ्याङ्क केलाउँदा किस्ता रकम लिएको लामो समयसम्म अर्को किस्ता माग नगर्ने गरेको देखिन्छ । किस्ता रकम लिएकाहरुले पनि घर बनाउन तदारुकता देखाएका छैनन् । ‘किस्ता लगेर पनि घर किन नबनेको हो भन्ने कुराको एकिन गर्न अब स्थानीय तह अलि बढि जागरुक हुनुपर्छ’ आचार्यले भने ‘त्यस्ता व्यक्तिको रकम फिर्ता गराउन तर्फ अब हामी लाग्नु जरुरी छ ।’
त्यस्तै जिल्लामा लाभग्राहीको सूचीमा नाम भएका र पहिलो किस्ता समेत लिएका १९ जनाले रकम फिर्ता गरेका छन् । घर बनाउन नचाहेका र आर्थिक र पारिवारिक जटिलताका कारण घर बनाउन असमर्थ रहेका १९ जनाले पहिलो किस्ता वापत लिएको रकम प्राधिकरणको खातामा जम्मा गराई भौचर कार्यालयमा बुझाएका हुन् ।
४ सय ३३ मध्ये २९० विद्यालयको भवन बने
जिल्लाभर भत्किएका ४ सय ३३ विद्यालयमध्ये २ सय ९० को भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । जसमा निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये ४० माध्यामिक र २५० आधारभुत विद्यालय छन् । त्यस्तै ५९ माध्यामिक र ६० आधारभुत गरी १ सय १९ विद्यालयका भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा गोरखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले बताए ।
जिल्लामा झण्डै अधिकांश विद्यालय दुई बर्षभन्दा बढि समय अस्थायी टहरामै पठनपाठन गराइएको थियो भने निर्माणधिन र स्रोत नजुटेका विद्यालयमा अझै पनि विद्यार्थी अस्थायी टहरामै पढ्दै आएका छन् । त्यस्तै जिल्लामा १८ वटा विद्यालय प्रवलिकरणको सूचीमा सिफारिसमा परेको इकाई प्रमुख आचर्यको भनाई छ । तर निर्माण हुन र स्रोत समेत जुट्न बाँकी रहेका केहि विद्यालय भने ‘मर्ज’ हुने प्रकृयामा रहेको इकाईले जनाएको छ । बिशेष गरेर विद्यालय पुर्ननिर्माणमा इकाईसंगै जाइका, एडिबी, युनिसेफ, जिएनआई, लायन्स क्लब, सेभ द चिल्ड्रन, नेपाल युथ फाउण्डेसन, भारतिय सरकार लगायतले सहकार्य गरेका थिए ।
चुम्चेत बाहेक सबै स्वास्थ्य चौकी भवन बने
जिल्लामा ५५ वटा स्वास्थ्य चौकी पूर्ण ध्वस्त भएका थिए भने २२ वटा अर्धध्वस्त अवस्थामा थिए । ति मध्ये उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाको चुम्चेत स्वास्थ्य चौकी बाहेकमा सबै भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । भवन पुर्ननिर्माणमा सरकारसंगै युनिसेफ, केयर नेपाल, आइएमसि लगायतका संस्थाहरु संलग्न भएको कार्यालयका नानी वावु दानीले बताए ।
तर भूकम्प गएको चार बर्ष बित्दा समेत जिल्ला अस्पताल गोरखामा भवन पूर्ननिर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको पूराना भवनलाई भत्काएर सोही स्थानमा नयाँ भवन बनाउने भनिएपनि हालसम्म निर्माण गर्न बोलपत्र समेत आह्वान हुन सकेको अवस्था छैन । जर्मनको केएफडब्लु नामक संस्थाको सहयोगमा ५० शैया सहित ४ फ्ल्याटको भवन बन्ने स्टमेट बनेपनि चार बर्ष आन्तरिक प्रकृयामै बितेको छ । हाल पुर्ननिर्माण गर्न पुराना भवन धमाधम भत्काइदैेछ ।
गोरखा दरवार पूर्ननिर्माण सुस्त
भूकम्पले क्षति पु¥याएको गोरखा दरबारको पुनर्निर्माण सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । गएको वर्ष वैशाख ७ गते विधिपूर्वक जगपूजा गरी पुनर्निर्माणको काम औपचारिक रुपमा सुरु भएको थियो । तर एक वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माणको करिब २० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको गोरखा दरबार हेरचाहअड्डाले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही र आवश्यक निर्माण सामग्री समयमै जुटाउन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम ठप्प भएको हो । श्री पचली भैरव ÷शिवाको जे.भी.ले आगमी मंसिर मसान्तसम्म सक्ने गरी कामको जिम्मा लिएपनि काम अघि बढ्न नसक्दा अन्योल भएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि ऐतिहासिक दरबार जगैसम्म भत्काइएको छ । पुनर्निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम सुरु भएको साढे दुई वर्षमा पुनर्निर्माण सकिसक्नु पर्नेछ ।
यता जिल्लामा भूकम्पले भत्काएका अन्य धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलहरुको समेत पुर्ननिर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्पले ध्वस्त भएका मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका स्थलहरुमा स्रोत अभवाका कारण उल्लेख्य उपलब्धी देखिन नसकेको हो ।
Previous Articleमनकामना आउदै गरेको बस त्रिशुलीमा खस्दा २ को मृत्यु १० घाइते
Next Article संसदीय ब्यबस्था बिरूद्ध क्रान्तिकारी बिद्रोह जरूरी